Lynda ANDRIATSITONTA aism, apmf	0 Commentaire nov 13, 2018
Manatanteraka fitsidihana eto amintsika ny delegasiona avy amin’ny akademia iraisampirenena AISM. Ao anatin’ny roa herinandro ny faharetan’ny iraka ataon’ny sekretera jeneralin’ny AISM miaraka amin’ny manam-pahaizana avy ao amin’ny akademia. Haka antontam-baovao momba ny fivezivezen’ny sambo eto Madagasikara sy ny tahan’ny lozam-pifamoivoizana an-dranomasina no anton-dian’ireto solontenan’ny sampandraharaha iraisampirenena misahana ny fandrindrana sy fanatsarana ny fanampiana ny sambo miandriaka ireto. Zava-dehibe amin’ny fivahinian’izy ireo ihany koa ny fanaovana ny tombana ny fitaovana hanampiana ny mpiantsambo.
Noho ny fahatsapana fa voka-dratsy ateraky ny loza an-dranomasina, nangataka ny AISM ny governemanta Malagasy amin’ny alalan’ny “agence portuaire maritime et fluviale” (APMF) hanao tombana ny fitaovana ampiasaina ao amin’ny servisy misahana ny fanampiana ny fivezivezena an-dranomasina eto amin’ny repoblikan’i Madagasikara. Dingana voalohany hirosoana any amin’ny matihanina kokoa izao mba hiarovana sy hiantohana ny sambo miandriaka ary hisorohana ny loza mety hitranga eny an-dranomasina. Alohan’ny fiafaran’ny fitsidihana ataon’ireto delegasionan’ny AISM ireo, hanao tatitra fohy izy ireo. Afaka iray volana kosa ny tatitra an-tsoratra mirakitra ny ny iraka natao. Ao anatin’izany ny toromarika hanatsarana ny paikady entin’ny APMF hiarovana ny mpiatsambo.
‹ FIDIRAN’NY VOKATRA AVY IVELANY: Poizina ho an’ny orinasa malagasy	› NEXTA: Une plateforme au service des jeunes